အိပ်မက်ချယ်ရီ: 09/01/2009 - 10/01/2009
မှောက်မှားလို့ ဖောက်ပြားအောင်လဲ သူဆွဲဆောင်
လှပတဲ့ ဘဝတွေကို အဆိပ်ငွေ့ချ
ရေးသားသူ- ညီမလေး Time 9:56 AM0comments
ပိုက်ဆံ ... ပိုက်ဆံ ... လောကကြီးမှာ ဒင်းကနေရာ တော်တော်ယူတယ် ။ သူရှိရင်ပဲ ပြည့်စုံပြီလို့ ယူဆကြတဲ့သူတွေလဲ အများမှအများကြီး......။ သူ့ကိုရဖို့ အတွက်ဆို ဘယ်သူသေသေ ငတေမာရင်ပြီးရော ဆိုသူတွေဟာလဲ ရေတွက်လို့တောင် မကုန်နိူင်ဘူး ။ ကိုယ်လဲ ရိုးရိုးသားသား ဝန်ခံရရင် ပိုက်ဆံဟာ မရှိတာထက် ရှိတာဟာ ကောင်းတယ် လို့တော့ ထင်တဲ့ သူတွေထဲမှာ ပါပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ဒင်းကလွဲပြီး တခြား ဘာကိုမှမမြင်ရလောက်အောင်ထိတော့ ဒင်းကို အရေးပါတယ်လို့ ကိုယ်မထင်မိဘူး ။ ထင်လဲမထင်ချင်သလို အရေးလဲမပေးချင်ဘူး ။ ဒင်းက မျက်နှာသာပေးရင် ရောင့်တက် တတ်လွန်းပါ ။ အဲ့တော့ ဒင်းကို မရှိမရှားလောက်ထက် ပိုပြီး မခင်တွယ်မိဘူး ။ မခင်လဲမခင်တွယ်လိုဘူး ။ ခပ်ခွာခွာ ခပ်ကင်းကင်းလေးပဲ နေချင်တယ် ။ အဲ့ဒါက ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရင်းအမှန် ။ အင်း....လိုက်နာရခက်တဲ့ အကောင်အထည် ဖော်ရခက်တဲ့ အခါတွေ အရမ်းများတဲ့ စိတ်ရင်းအမှန်လေး ဆိုရင်တော့ ပိုမှန်မယ်ထင်တယ် ။
ဒါပေမဲ့ ခက်သားလားနော် ။ ဒင်းက အင်မတန် ပေါက်ပေါက် ရောက်ရောက်ကလည်းရှိ ၊ ဒင်းမျက်နှာလေးကြောင့် အရာတော်တော်များများက ရှောရှောရှုရှုပြီးသွားကြတယ် ၊ အဆင်ပြေသွားကြတယ် ဆိုတော့လဲ ဒင်းက သက်မဲ့ဆိုပေမဲ့ ကိုယ်တို့ သက်ရှိ လူသားတွေကို ကိုင်လှုပ်နိူင်စွမ်းသပေါ့။ ဒင်းက နေရာလည်း သိပ်ချဲ့လာတတ်သပေါ့ ။ ပြီးတော့ ဒင်းက လူ့တွေကို ကိုင်လှုပ်နိူင်စွမ်းတယ် ဆိုတော့ ခပ်ကြွကြွ နဲ့ နဲနဲလေးမှ အငြိမ်နေတဲ့ကောင် မဟုတ်ဘူးရယ် ။ အတော်မွှေတဲ့အကောင် ။ ဒင်းကြောင့် လူတွေမှာ တတ်လိုက်ရတဲ့ ပြသာနာတွေ ၊ ပွေလိုက်ရတဲ့ ရတတ်တွေ ၊ ကြီးလိုက်တဲ့ ဒုက္ခတွေ ဆိုတာ မနည်းမနောပါပဲ ။ ဒင်းဝင်လာပြီ ဆိုရင်တော့ မိဘနဲ့သားသမီး ဆိုတာတွေလည်းပျောက်ကုန်တယ် ။ မောင်နှမဆိုတာလဲ မရှိတော့ဘူး ။ အဲ့လောက် အရင်းအနှီးဆုံး သွေးသားကြီးတွေကိုတောင် ဒင်းက တစစီ ဗြန်းဗြန်းကွဲသွားအောင် လုပ်စွမ်းနိူင်တာနော် ။ ပေါ့သေးသေးတော့ မထင်နဲ့ ဆရာ ။ သက်မဲ့ဆိုပေမဲ့ အရာအားလုံးကို ပရမ်းပဒါ ဖြစ်နိူင်စွမ်းတာဟာ ဒင်းရဲ့ မကောင်းသော အာသာချက်ပဲ ။ အဲ့ဒီအားသာချက်ဟာ ကိုယ်တို့တွေ အားလုံး ကျပ်ကျပ်သတိထားရမဲ့ အားသာချက် ဆိုရင်လည်း မမှားဘူး လို့ ကိုယ်တော့ မြင်မိတယ် ။
အဲ့လိုပဲ.. ဒင်းကလွဲပြီး ကျန်တာ ဖွဲ၊ ဆန်ကွဲလို့ ထင်ကြတာ ၊ ဒင်းမှဒင်းဖြစ်နေကြတာ ၊ ဒင်းအတွက်ဆို ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လာထား ဆိုတဲ့ အတွေးတွေနဲ့ လှုပ်ရှားနေကြတာတွေ ကတော့ ဦးနှောက်ရှိပြီး သတ္တလောကမှာ အသိဉာဏ် အရှိဆုံးပါပဲဆိုတဲ့ ကြီးကျယ် မြင့်မြတ် လှသော ကိုယ်တို့ မဟာလူသားများရဲ့ အားနည်းချက်ပေါ့ ။ ကိုယ်တို့လူသားတွေမှာ အဲ့ဒီအားနည်းချက်ရှိလို့ လဲ တခါတခါ ဒင်းပြုသမျှ နုရတဲ့ဘဝမှာ နေနေကြရတာပေါ့လေ ။ ပြောမဲ့သာပြောတာပါ ဒင်းပြုသမျှကို နုချင်သူကလည်း ခပ်များများရယ် ။ ဒါကြောင့် တခါတခါ ကိုယ်သိပ်စိတ်ကုန်တယ် ။ ဒင်းကြောင့် ခေါ်ချင်ပြောချင်ကြတယ် ။ ဒင်းကြောင့် နေရာပေးချင်ကြတယ် ။ စိတ်ရင်း အစစ်တွေက ဒင်းအောက်မှာ ပြားပြားဝပ်ကုန်ကြတယ် ။ ဒင်းကြောင့် နေရာရနေတဲ့ ဘဝကြီးလောက် စက်ဆုပ်စရာကောင်းတာ မရှိဘူးလို့ ကိုယ်တော့ ထင်တာပဲ ။ ဟုတ်တယ်လေ..စဉ်းစားကြည့်ပါအုန်း .. မပြုံးချင်ဘဲ ပြုံးပြကြ ၊ မခေါ်ချင်ပါဘဲလဲ ဒင်းမျက်နှာလေးကြောင့် အောင့်အီးပြီး ခေါ်ကြပြောကြနဲ့ မြင်ရရုံနဲ့တောင် အော်ဂလီဆန်တယ် ။ ဘယ်မလဲ စစ်မှန်တဲ့ ရင်ဘတ်တွေက ....ဘယ်မလဲ စစ်မှန်တဲ့ မေတ္တာတွေက ..... အားလုံးဟာ အတုတွေချည်းပဲ ။ အဲ့ဒီ အတုတွေကိုကော ဘယ်လိုသတ္တိမျိုးနဲ့ ယုံကြည်စွာ ခံစားရမလဲ ။ အဲ့လိုဘဝမျိုးကို မှာနေရလောက်အောင် ဒင်းကို အမောင့်များများမပိုင်တဲ့ ကိုယ်တောင် မခံစားရဲဘူး .....ယုံလဲမယုံရဲဘူး ။ အဲ့လို မကောင်းတဲ့ အားသာချက်ကို ပိုင်တဲ့ ဒင်းနဲ့ မကောင်းတဲ့ အားနည်းချက်ကို လက်ဝယ်ရှိနေတဲ့ လူတွေကိုလည်း ကိုယ်မုန်းတယ် ။အဲ့ဒါကြောင့် ကိုယ်အမုန်းဆုံး အရာ ကိုပြပါဆိုရင် တော့ သူတို့ နှစ်ကောင်ပဲ..
ရေးသားသူ- ညီမလေး Time 2:50 PM 1 comments
အကြောင်းအရာ။ ။ ကြုံဖူးတဲ့ အဖြစ်တွေရယ်
ကုသိုလ်လေးရယ်မှ အိုတခါ ။
ရေးသားသူ- ညီမလေး Time 6:54 AM 1 comments
အစရယ် သိမ်းဖို့ခက်ချေပြီ ။
တ၀ဲဝဲလည်၍ ဆင်းလေပြီ ။
စာကြွင်း ။ ။ ဒီကဗျာလေးကို တခုခုလိုနေသလားလို့ ရေးထားပြီး တော်တော်နဲ့မတင်ဖြစ်ဘူး ။
ဘယ်လိုမှ ထပ်ပြင်ထပ်ပေါင်းဖို့ စဉ်းစားလို့မရတာနဲ့ ဒီတခုခု လိုနေသလိုလိုလေး အတိုင်းပဲ တင်လိုက်ပါတယ်။
ရေးသားသူ- ညီမလေး Time 7:17 PM2comments
ခုတလော မေးလ်တွေထဲမှာ မြန်မာမိန်းမငယ်လေးတွေရဲ့ မလုံ့တလုံပုံတွေ ပလူကိုပျံနေတာပဲ ။ သာမာန်အရပ်သူတွေလည်း ပါသလို ၊ အနူပညာရှင်တွေလည်း ပါပ ။ အင်း..... ဗိုလ်ချုပ်ပြောသလိုပဲ တို့ဗမာတွေဟာ သိပ်တလွဲဆံပင်ကောင်းချင်ကြတယ်နော် ။ မဟုတ်တဲ့ နေရာမှာ သူများအတုကို ခိုးရမယ်များဆို ဖြစ်ကြပ ။ သူတို့ကိုကြည့်ပြီး ပထမဆုံး တခုလောက် မေးကြည့် ချင်စမ်းပါဘိတယ် ။ သူတို့များရဲ့ မိဘတွေက အဲ့လို ဝတ်နေစားနေတာကို လိုလိုလားလား ပဲလား ဆိုတာကိုပါ ။
ခေတ်မှီတာနဲ့ ခေတ်ဆန်တာက တခြားစီပါလေ ။ ခုဟာက ခေတ်မှီတာလဲ မဟုတ်သလို ခေတ်ဆန်တာလဲ မဟုတ်ဘူးတော့ဘူးရယ် ။ ခေတ်လွန်နေတယ် ဆိုတဲ့ အဆင့်ကိုတောင်ကျော်နေလို့ ကိုယ်တော့ ခေတ်ပျက်နေတယ် လို့သာပြောလိုက်ချင်တော့တာပဲ ။ မြင်မကောင်း ရှု့မကောင်းအောင်ကို ဝတ်နေစားနေကြတာ ။ မရှက်ကြဘူးလား မသိပါဘူးနော် ။ ဒါမှမဟုတ် အဲ့လိုပြစားမှကို ရကြတော့မဲ့ ဘဝတွေ မို့လို့လားလို့ ခပ်ရိုင်းရိုင်းသာ မေးလိုက်ချင်တော့တယ် ။ ဟီရိသြတ္တပ္ပတရား ထွန်းကားတဲ့ မြန်မာပြည်ကြီးမှာ နေထိုင်နေကြတယ် ဆိုတာလေးလောက်တော့ သတိရပါအုန်း အမိတို့ရယ် ။ ပြီးတော့ နင်တို့ဟာ နင်တို့ ထင်တိုင်းကျဲတာက ပြသာနာမရှိဘူး နိူင်ငံနဲ့ ချီပြီး သိက္ခာကျတယ်ဟဲ့ လို့သာ ခေါင်းကို ခပ်နာနာလေး ခေါက်ပစ်လိုက်ချင်တယ် ။ တကယ်ပါပဲ ။
အဲ့လိုပြောလို့ ရင်ဖုံးအကျီ င်္နဲ့ ထိုင်မသိမ်းနဲ့ နေရမယ့်လို့ ကိုယ်ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး ။ သူ့နေရာနဲ့ သူပေါ့။ ခုဟာက လိုတာထက်ကို ပိုတို ၊ ပိုဖော်နေကြသကိုး ။ ကိုယ့်နိူင်ငံရဲ့ ဝတ်စားဆင်ယဉ်မှု ကို အလေးထားပြီး ခေတ်မှီမှီ စမတ်ကျကျ နဲ့ ကျက်သရေရှိရှိလေး ဝတ်လို့စားလို့ ရတဲ့ နည်းတွေမှ အများကြီးပါလေ ။ မြန်မာဆန်တဲ့ ဝတ်စာဆင်ယင်မှုကလည်း ကြိုက်တဲ့ နိူင်ငံနဲ့ ရင်ပေါင်တန်း မသာဘူးဆိုရင်တောင် အောက်တော့မကျဘူးလို့ ကိုယ်ရဲရဲပြောရဲပါတယ် ။ ဘာကိစ္စနဲ့များ လိုတာထက်ပိုပြီး အမေကျော် ဒွေးတော်လွမ်းနေကြပါလိမ့် နော် ။ဟင်း....... ရင်မောစရာကြီးပါပဲ။
နိူင်ငံခြားကိုရောက်နေတဲ့ တချို့မြန်မာမိန်းကလေးတွေဆိုလဲ အဲ့လိုပဲ ။ ဒီကနိူင်ငံခြားသူတွေထက် ဒင်းတို့က ကဲနေကြတယ် ။ ရောမရောက်လို့ ရောမလိုကျင့်တယ်ဆိုရင်လည်း တခြားကောင်းတဲ့ အတုခိုးသင့်တဲ့ ဟာတွေကျ ဘာလို့များ လိုက်မကျင့်သလဲနော် ။ စဉ်းစားစရာပါပဲ ။ ပိုဆိုးတာက သူတို့က မဟုတ်တဲ့ နေရာဆို ရောမကလူတွေထက် အကဲဆတ်နေကြတာပဲ ။ ဘယ့်နှယ့်ဟာတွေမှန်းကို မသိဘူး ။ အခွင့်အရေးလေးများ ရရင် အဲ့ဒီဟာမလေးတွေကို တခါလောက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အင်တာဗျူး ကြည့်ချင်သား ။ ကိုယ့်တိုင်းပြည်က ယဉ်ကျေးမှုကို မသိလို့ အဲ့လို ဝတ်စားနေကြတာလား ??? သိရက်နဲ့ တမင် ဂရုမစိုက်ဘဲ ထင်တိုင်းကျဲနေကြတာလား ??? ဒါမှမဟုတ် အဲ့လိုဝတ်စားရတာကိုပဲ အဟုတ်ကြီးထင်ပြီး အလှကြီးလှ နေတယ်လို့များ မှတ်ယူ နေကြသလား ??? ရှက်ကြောက်ခြင်း ဆိုတာကိုကော ဘာမှန်းသိကြရဲ့လား.... စသဖြင့်ပေါ့ ။ သူတို့ ဘယ်လိုဖြေကြမလဲတော့ ကိုယ်မသိဘူး ။ တခြားသူတွေ ဘယ်လိုသဘောထားမလဲ ဆိုတာလဲ ကိုယ်မမှန်းတတ်ဘူး ။ ကိုယ်ကတော့ သူတို့ကို ကြည့်ပြီး အော်ဂလီဆန်တယ် ။ ပြီးတော့ အဲ့လိုဟာတွေနဲ့ တတိုင်းပြည်ထဲလို့ပြောရမှာလဲ ရှက်တယ် ။
ကိုယ်ထင်တယ် ...အဲ့လို ဖော်ဖော်လော်လော်တွေက ကိုယ်တို့ဆီမှာ ခုမှ ခေတ်စားခါစ လားလို့ ။ ဒိထက်ပိုပြီးများ တွင်ကျယ်လာရင် ၊ အဲ့လိုဝတ်တာစားတာကို မဆန်းပါဘူးလို့များ ထင်လာကြရင် ............ ဟူးးးးးးး မတွေးရဲစရာပဲ......။
ရေးသားသူ- ညီမလေး Time 5:25 PM0comments
အမေ.....ဒီနေ့ အမေ့ရဲ့ ၅၆နှစ်မြောက် မွေးနေ့နော် ။ အမေ့မွေးနေ့ ဒီနေ့ မှာလဲ အဖေ့မွေးနေ့တုန်းကလို အမေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက် တွေကို ရေးချကြည့်ချင်မိတယ် အမေ ။ အမေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာတွေ ဘယ်လောက်ထိ မှတ်မိနေလဲ ၊ ဘာတွေရှိခဲ့လဲ ၊ ဘာတွေ ခံစားခဲ့ရလဲ ၊ ခုကော ဘာတွေ ခံစား နေရလဲပေါ့.. ကောက်ကြောင်းတခု ဆွဲကြည့်မိတယ်အမေ ။
အမေ သိသလား ? အမေ့ အကြောင်း စဉ်းစားမိလိုက်တာနဲ့ အဦးဆုံး ဘာပေါ်လာတယ် ထင်သလဲဟင် ? သမီးတို့ မူလတန်း ကျောင်းသူဘဝ ကနေ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကြီးတွေ ဖြစ်တဲ့ထိ အမေမပါရင် မပြီးတဲ့ ၊ အနားမှာလည်း အမြဲရှိနေပေးခဲ့တဲ့ သမီးတို့ရဲ့ စာကျက်ချိန်တွေပဲ အမေ...။ အတန်းပညာကို ကောင်းစွာ မသင်ကြားခဲ့ရတဲ့ အမေက သမီးတွေရဲ့ ပညာရေး အတွက်များဆို တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က အမြဲ အားသွန်ခွန်စိုက် လုပ်ပေးဖို့ အဆင်သင့် ရှိနေခဲ့တယ် ၊ လုပ်လည်းလုပ်ပေးခဲ့တယ်နော် ။ အမေက စာမေးပွဲဖြေရမဲ့ သမီးတို့ထက် အမြဲ ဝီရိယ ပိုကောင်းခဲ့တယ်နော် ။ မနက် ၄နာရီ ၊ ၄နာရီခွဲလောက်ဆို အမေ့အခန်းကနေ "ခင်ခင့် ၊ မိန်မိန်း ထတော့ ငါ့သမီးတွေ ၊ စာကျက်ရအောင် ထတော့ " ဆိုတာမျိုး " ဟဲ့ ကောင်မလေးတွေ မထကြသေးဘူးလား .. အော်..ထကြတော့လေ .. စာမေးပွဲ ဒီလောက်နီးနေတာကို ထကြတော့ " ဆိုတာမျိုးဟာ သမီးတို့ရဲ့ မနက်ခင်း နှိုးဆက်သံတွေအဖြစ် ရှိနေခဲ့ဖူးတယ်နော်.. အမေ ။ ပြီးတော့ သမီးတို့ထပြီဆိုတာနဲ့ တပြိုင်နက် သမီးတို့ရဲ့ ဘုမသိဘမသိ ကြောက်တယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်ကြီးကြောင့် အမေလည်း လိုက်ထပေးရတယ်နော် ။
မှတ်မိနေပါသေးတယ် အမေ ၊ မျက်စိထဲလည်း ခုထိ မြင်ယောင်နေပါသေးတယ် ။ သမီးတွေ ခြင်ကိုက်မှာ စိုးလို့ ခြင်ဆေးခွေ ထွန်းပေးခဲ့တာတွေ ၊ ဘာကိုမှန်းမသိ ကြောက်တဲ့ သမီးတို့ ညီအစ်မ နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ မျက်စိနဲ့ အနီးဆုံးရှိမဲ့ နေရာကို ရွေးပြီး ထိုင်စောင့်ပေးခဲ့တာတွေ ၊ ရုတ်တရက် မီးများပျက်ပြီဆို ကြောက်တတ်တဲ့ သမီးတို့အတွက် ပါးစပ်ကလည်း အသံပေးရင်း ပြေးဟယ်လွားဟယ်နဲ့ ဖယောင်းတိုင်ထွန်း ဘာထွန်းနဲ့ သမီးတို့ထက် အလုပ်ပိုများခဲ့တဲ့ အမေ့ရဲ့ပုံရိပ်တွေ ၊ တခါတခါကျလည်း သမီးတို့နဲ့ မနီးမဝေး ပက်လက်ကုလားထိုင်လေးပေါ်မှာ သမီးတို့ရဲ့ စာကျက်သံတွေကို နားစွင့်ရင်း မျက်စိလေးကိုမှိတ်လို့ အသာလေး မှေးပြီး စောင့်နေပေးတဲ့ အမေ့ရဲ့ ပုံရိပ်တွေကိုပေါ့ ...။ အဲ့လို မျက်စိလေးမှိတ်ပြီး မှေးနေတဲ့ အမေဟာ သမီးတို့ရဲ့ စာကျက်သံများတိတ်သွားလို့ကတော့ ချက်ချင်းပဲ " ခင်ခင့် ၊ မိန်မိန်း " ဆိုပြီး ထထပြီးလည်း သတိပေးတတ်သေးတာနော် ။ အရာအားလုံးကို ပြတ်ပြတ်ထင်ထင်ကြီးကို မှတ်မိနေပါသေးပါတယ် အမေ... ။ တခါတခါ မနက်အစောကြီး စာထကျက်ဖြစ်ရင် အမေ့ကိုသိပ်လွမ်း ၊ သိပ်သတိရတာပဲ အမေရယ် ... ခုတော့ တနယ်ဆီဝေးနေတယ် ဆိုတော့ မနက်ဆို ကြင်နာမှုမပါတဲ့ သံပတ်ပေး နှိုးစက်ကလွဲလို့ ကြင်နာစွာ နှိုးပေးမဲ့လူလည်းမရှိဘူးအမေ ၊ စိတ်ခြောက်ခြားလို့ ကြောက်နေရင်လည်း အမေ့လို အနားမှာနေပေးမဲ့သူမရှိတော့ ဘုရားစာရွတ်ပြီး စောင်ခေါင်းမြီးခြုံနေဖို့ပဲရှိတယ်အမေ.. ။ မီးမပျက်တဲ့ အရပ်ဒေသ ဆိုတော့ မီးပျက်မှာမစိုးရိမ်ရပေမဲ့ ဖယောင်းတိုင်မီး မှိန်မှိန်အောက်မှာ အမေ့ဘေးနားကပ်ပြီး စာကျက်ရတဲ့ ငယ်ငယ်တုန်းကဘဝလေးလောက်လဲ ရင်ခုန်ဖို့ မကောင်းဘူးအမေ...။ သမီးတို့ရဲ့ စာကျက်ချိန်တွေဟာ အမေမရှိရင် မပြီးပြည့်စုံဘူးဆိုတာ အမေနဲ့ ဝေးနေတဲ့အချိန်မှာ အသေအချာကြီး သိလိုက်ရတယ်အမေ..။ ဖြစ်နှိုင်ရင် အမေ့ ရင်ငွေ့ကိုခံပြီး အမေ့ဘေးမှာ စာကျက်ချင်သေးတယ်အမေရယ် ...။ အဲ့ခါကျရင်လဲ သမီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကလို အနားမှာစောင့်ပေးရမယ်နော် ..အမေ..နော် ။
အမေဟာလေ သမီးတို့ကျောင်းစာနဲ့ ပတ်သက်ရင် ဂိုက်ဆိုလည်း ဂိုက်မို့လို့၊ ကျူရှင်ဆိုလဲ ကျူရှင်မို့လို့ အားလုံးကို သမီးတို့စိတ်ကြိုက် .. ။ စာကျက်ကူပေးဖို့ ဆရာမခေါ်ချင်တယ် ဆိုရင်လည်း မငြီးမငြူ ဆရာမတွေဆီ ဆိုက္ကားနဲ့တဖုံ စက်ဘီးနဲ့ တမျိုး သွားပြောပေးရတာ.. ။ ဒါတင်ဘယ်ကမလဲနော် သူ့သမီးတွေ ကျောင်းမှာ မျက်နှာမငယ်ရအောင် ပွဲတခုခု လုပ်ပြီဆိုရင် ကျောင်းက ဆရာ၊ဆရာမတွေ အတွက် ချိုင့်ကြီး ချိုင့်ငယ်နဲ့ ပို့ရတာလဲ အမော ။ အမေ.. အမေဟာ သမီးတို့ မသိနိုင်တဲ့ မမြင်နိုင်တဲ့ နေရာတွေအထိ သမီးတို့ကို လိုက်ပါ စောင့်ရှောက်ပေးနေခဲ့တယ်နော် ...။ အမေသာ အဲ့လောက် အားသွန်ခွန်စိုက် ရှိမနေခဲ့ရင် သမီးတို့တွေ ခုလို ဘွဲ့ရ ပညာတတ်တွေ မဖြစ်နိုင်ဘူးအမေ ... ဒါတွေ အားလုံးဟာ အမေ့ရဲ့ ကျေးဇူးတွေချည်းအမေ..။ အမေကို သမီးဒီနေရာကနေ ကျေးဇူးတင်စွာ ၊ ရိုသေစွာ နဲ့ လက်ဆယ်ဖြာထိပ်မှာမိုးလို့ ရှိခိုးကန်တော့ပါရစေအမေ.. ။ အမေဟာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ပညာရေးပါရမီ နုံနဲ့ခဲ့လို့ တချို့သော ဆွေမျိုးတွေ နှိမ်ချတာကို ခါးသီးစွာ ခံစားခဲ့ရတယ်နော်..။ အမေဟာ အတန်းပညာမှာ ညံ့ချင်ညံ့မယ်အမေ ။ဒါပေမဲ့ အမေ့ရဲ့ ဘဝပညာဟာ မညံ့ပါဘူး ။ အမေဟာ စည်းစနစ်ကျတယ် ၊ ချွေတာစုဆောင်းတတ်တယ် ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်တခုအတွက် လုပ်ရဲရင်ခံရဲတယ်ဆိုတဲ့ သတ္တိအပြည့်ရှိတယ် ၊ အသုံးအဖြုန်းကိုလဲ ကောင်းကောင်းကြီးခွဲခြားနိုင်တယ် ၊ နိမ့်ကျတဲ့ ဆွေမျိုးတွေကို ကြည့်ရှု့စောင့်ရှောက်တယ် ၊ သားသမီးတွေအပေါ်မှာလဲ မိခင်တယောက်ရဲ့ မေတ္တာစေတနာတွေကို မခြွင်းမချန်ပေးတယ် ၊ အဲ့ဒီမေတ္တာတွေနဲ့ သမီးတို့ကို နွေးထွေးစေခဲ့တယ် ။ သမီးတို့အတွက်တော့ အမေဟာ သူရဲကောင်းပဲ အမေ .. သူရဲကောင်းပဲ ..
အမေက ဟင်းချက်လည်းသိပ်ကောင်းတာနော် ။ အမေ့ရဲ့ဆိတ်ဝမ်းတွင်းသားဟင်းရည်၊ မုန့်တီသုပ်၊ကြာဇံဟင်းခါး၊လက်ဖက်နှပ်၊ ဝက်သားတုတ်ထိုး၊ ပိန်းဥမုန့်.. ပြောရရင် ကုန်တောင်မကုန်နိုင်ပါဘူး ။ သမီးတို့တွေ စားချင်တယ်များဆိုရင် အမေ့မှာ မမောနိုင်မပန်းနိုင် ချွေးတလုံးလုံးနဲ့ ပြုံးပြုံးပြုံးပြုံးနဲ့ ချက်ပေးရှာတာ ။သစ်သီးဆိုလဲ သစ်သီးမို့ ဘယ်သမီးက ဘာကြိုက်တတ်တယ် ဘာမကြိုက်ဘူးဆိုတာလဲ အမေ မမေ့ဘူးရယ် ။ ဒါတောင် သမီးတို့တွေက အမေက ဘယ်သမီးကို ပိုချစ်ပါတယ် သူ့သားကျဘယ်လိုဆိုပြီး ခဏခဏ ဂျီကျတတ်ကြသေးတာနော် ။ အဲ့ဒီအတွက် ခွင့်လွတ်ပါအမေရယ် ။ အမေရဲ့ အချစ်ကို အပြည့်အဝခံယူချင်ကြတဲ့ သမီးတွေကို အမေနားလည်ပေးပါနော် ။ အမေဟာ အဖေ့လောက် ချစ်တာတွေကိုမှ ထုတ်မပြဘဲကိုး ။ ပြီးတော့ အဖေ့လောက်လဲ နီးနီးကပ်ကပ်မှ မနေဘဲကိုးလေ ။ ထုတ်မပြတတ်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်း မသိမသာနဲ့ သမီးတို့ရဲ့ လိုအပ်ချက်အားလုံးကို ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တယ်ဆိုတာ သမီးတို့အားလုံးသိပါတယ်အမေ ။ ခံစားလို့လည်းရပါတယ် ။ ခုချိန်ထိ အမေဟာ သမီးတို့တွေ လုပ်ချင်တာကို သမီးတို့တွေ ပူဆာတာကို ငြင်းပစ်တာမျိုး မလိုက်လျောခဲ့တာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးနော် ။ သင်္ကြန်ဆိုလဲ မဏ္ဍပ်ဆောက်ပေးရတာနဲ့ ၊ ခရီးတွေလဲ ခဏခဏထွက်ပေးတယ် ပို့ပေးတယ်နော် ။ ခရီးထွက်တယ်ဆိုလို့ သတိရတာလဲ ရှိသေးတယ်အမေ ။ အမေနဲ့ ခရီးထွက်ရင် အမေက ချိုင့်ကြီးချိုင့်ငယ်နဲ့ စားစရာတွေ အမြဲသယ်ယူစေတာ အမေကိုယ်တိုင်လဲ စီစဉ်ပေးတာပဲ ။ အဲ့လိုမျိုးသယ်တော့ပြုတော့မယ်များဆို ကိုယ်တိုင်သယ်ရတာလဲမဟုတ်ပါဘဲနဲ့ သမီးတို့တွေက စူလို့ပုတ်လို့ ရှိုးပဲ့တယ်လို့ ထင်ပြီး အမေ့ကိုပြောကြသေးတာနော် ။ ဒါပေမဲ့ လမ်းမှာ စားကြသောက်ကြတော့လဲ သမီးတို့တွေပါပဲ..ဟဲဟဲ..အဲ့ဒီအချိန်တွေကို တွေးမိတိုင်း ရယ်လဲရယ်မိတယ် ။ လွမ်းလဲလွမ်းတယ် အမေရယ် ။ အဲ့လို ချိုင့်တွေပလုံးတွေနဲ့ သမီးတို့ မိသားစု တပြူံတမကြီး ခရီးတခါလောက် ထပ်သွားချင်သေးတယ် အမေရယ် ...အဲ့ဒီအခွင့်အရေးမျိုး နောက်တခါလောက် ပေးပါလို့လဲ ဘုရားရှေ့မှာ ဆုတောင်းမိတယ် အမေ ...
နောက်ပြီး အမေ့ရဲ့ သိပ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အချက်တချက်ရှိသေးတယ်အမေ ။ အမေက မုံရွာသူ တရုတ်မဆိုပေမဲ့ အနေအထိုင် အပြင်အဆင် သိပ်ရိုးစင်းတာ ။ အမေက သနပ်ခါးကလွဲရင် ပါးပေါ်မှာ ဘာမှတင်လိုတဲ့ မိန်းမမဟုတ်ဘူး ။ အပြင်အဆင်ကြတော့လဲ ကျစ်ဆံမြီး ၂ဘက်ကျစ်ပြီး အဲ့ဒါကို လိမ်ပြီးထုံးလိုက်တယ် ဒါပဲ ။ အဲ့ဒီကျစ်ဆံမြီးဆံထုံးက အမေ့ရဲ့ သင်္ကေတပဲ ။ အမေ့ရဲ့ သမီးတွေကိုလဲ ဆံပင်ရှည်လာရင် အမေက ကျစ်ဆံမြီးကျစ်ကျစ်ပေးတာ ။အမေ့ကျစ်ပေးတဲ့ ကျစ်ဆံမြီးက တင်းတင်းရင်းရင်းနဲ့ သိပ်ပြီးသပ်ရပ်တာကော ။ အမေ့ရဲ့ အပြင်အဆင်ဟာ သမီးတို့တွေ အပေါ် ဘယ်လောက်လွမ်းမိုးသလဲဆိုရင် သမီးတို့တွေ အားလုံး သနပ်ခါးကြိုက်တယ် ။ ကျစ်ဆံမြီးကို ချစ်ကြတယ် ။ အမေ့ ရဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံကြလဲ ကြည့်ပါအုန်း ဘယ်လောက် ကောင်းတာတွေဝယ်ပေးပေး အပေါ်ဆုံးမှာရှိနေတဲ့ လေးငါးထည်ကို ဒါဒါပဲထပ်နေအောင်ဝတ်တာ ။ ဒီကြားထဲ အင်္ကျီကို ထမီကြားထဲကိုထိုးပြီးဝတ်လို့ ပြောလိုက်ရတာလဲ အမော ။ စမတ်ကျကျ ဝတ်စမ်းပါ အမေရယ်လို့ ပြောရင် အမေက အော်... အကျင့်ပါနေလို့ပါ သမီးရယ်တဲ့ ။ ဒါပဲ ။ အဲ့ဒါ အမေ့ရဲ့ လက်သုံးစကား။ သမီးတွေကဘယ်လောက်ပြောပြော အမေကတော့ ပြောတုန်းခဏပါပဲ ။ အဲ့ဒါကြောင့် သနပ်ခါးဘဲကြား ကျစ်ဆံမြီးဆံထုံးနဲ့ အမေ့ကိုဆို အမြဲ စမတ်ကျပြီး သန့်ပြန့်မွှေးကြိုင်နေအောင်နေတတ်တဲ့ အဖေက တခါတခါ တောသူမလို့ ချစ်စနိုးနဲ့ စစပြီးခေါ်တာ ။ အမေ့ အပြင်အဆင် အနေအထိုင်ကရိုးပေမဲ့ အမေက တကယ့်မိန်းမချော ။ အမေများ ပြင်ဆင်ဖြီးလိမ်းထားပြီရင် သိပ်ကြည့်လို့ကောင်းတာ .. ကျက်သရေ သိပ်ရှိတာ ။ ပြီးတော့ အမေက ဂုဏ်တုဂုဏ်ပြိုင်တွေကို စိတ်မဝင်စားဘူး ၊ ပကာသနတွေဘာတွေလဲ မစဉ်းစားဘူး ကိုယ်အဆင်ပြေသလို အေးအေးသာသာ နေတတ်တဲ့ မိန်းမမျိုး ။ ဘယ်လောက်တောင် ရိုးစင်းလိုက်သလဲနော် ။ ဒါပေမဲ့ အမေက မဟုတ်ရင်တော့ မခံဘူး ။ ဇာတ်ဇာတ်ကြဲ သတ္တိကလဲ အပြည့်ပဲ ။ ပြသာနာတခုခုဖြစ်လို့ ရုံးတွေဂတ်တွေ သွားရလဲ အမေကရှေ့တန်းက .. သူမှန်လို့ကတော့ လာခဲ့ပဲ ။ အမေ့ကို "မြို့မက တရုတ်မကြီး" လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ စွာဂုဏ် နဲ့ ရိုးဂုဏ်နဲ့ပေါင်းပြီး ဟိုးအထက်အရာရှိကအစ ချောင်ကြိုချောင်ကြားက ဆိုက္ကားသမား၊ ဈေးသည်အဆုံး အမေ့ကို သိတယ် ။ ငယ်ငယ်တုန်းက အမေအဲ့လို စွာတာ ရိုးတာကြီးကို ရှက်စရာလို့ထင်ခဲ့မိသေးတယ် ။ နောက်တော့ တဖြည်းဖြည်း အမေတို့ အဖေတို့ရဲ့ ရိုးစင်းမှု ၊ တပါးသူအပေါ်ကြင်နာသနားတတ်မှု့တွေကို ဂုဏ်ယူတတ်လာတယ် အမေ.. အမေရဲ့ သမီးဖြစ်ရတာကို ကျေနပ်တတ်လာတယ် အမေ ။ ဆိုင်ကြောင့် လူပေါင်းစုံနဲ့ ဆက်ဆံရတဲ့ အတွက် အမေစွာမှ ရတယ်ဆိုတာကို နားလည်လာတယ်အမေ ။
အမေဟာ ခုနောက်ပိုင်း စာတွေသိပ်ဖတ်လာတယ်နော် ။ တရားပွဲတွေ သွားတယ် ။ အခွင့်သင့်သလို တရားစခန်းတွေဝင်လာတယ် ။ သမီးဖြင့် သိပ်ဝမ်းသာမိတာပဲ ။ အမေ့ကို တရားတွေနဲ့ သိပ်အေးချမ်းနေစေချင်တာ ။ သမီးတို့အတွက် ရုန်းကန်ခဲ့ရလို့ အမေလုပ်သင့်တာတွေကို အချိန်နှောင်းမှ လုပ်ရတယ်နော် အမေ ။ သမီးတို့ကြောင့် ပူနေတာတွေကို အေးစေချင်ပြီအမေ .. သမီးတို့အတွက် မောခဲ့ရတာတွေ ရှိရင် အဲ့ဒီအမောတွေကို ပြေစေချင်ပြီ အမေရယ် .. သမီးတို့ကြောင့် အမေ့ဘဝအတွက် ပြင်ဆင်မှု့တွေ မလုံမလောက်ခဲ့ရင်လို့ တွေးမိရင် နှလုံးသွေးတွေ ရပ်တန့်သွားမလောက် ခံစားရတယ် အမေ ။ အဲ့ဒါကြောင့် သမီး အမေ့ကို ဒိထက်ပိုပြီး ဘုရား ၊ တရားလုပ်ဖို့ အမြဲပဲ တိုက်တွန်းမိတာပါ ။ အမေ့ကို တရားရိပ်အောက်မှာ ဘာအပူအပင်မှမရှိဘဲ အေးချမ်းစွာ နေစေချင်တာ ရင်ထဲကလာတဲ့ သစ္စာစကားပါအမေ ။ အမေတရားစာအုပ်လေးများ ဖတ်နေတာ မြင်ရရင် ရင်ထဲမှာ တကယ်ကြည်နှုးမိတယ် ... အမေနဲ့အဖေများ တူစုံတွဲလို့ တရားစခန်းသွားတယ် ဆိုရင် ပြောမပြတတ်အောင်ကို ဝမ်းသာမိတယ် ။ အဲ့လို အခြေအနေမျိုးတွေ ရှိအောင်လဲ သမီးမှာ ကြံရဖန်ရတာလဲ အမော .. အကျပ်ကိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး အမေရယ် ... အမေတို့ကို တရက်၊ တမနက်၊တစက္ကန့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် တရားအေးရိပ်မှာ ပျော်မွေ့နေစေချင်လွန်းလို့ပါ ။
သမီးလေ အမေအကြောင်းကိုရေးဖို့ စစဉ်းစားတုန်းက ဘာတွေရေးရမှန်း မသိဘူးအမေ .. ဒါပေမဲ့ ရေးမိတော့လဲ မကုန်နိုင်တော့ဘူး အမေ ... ဟိုအကြောင်းလေးလဲ ရေးချင် ဒီအကြောင်းလေးလဲ ရေးချင်နဲ့ တန်းစီပြီး အများကြီးပေါ်လာတယ် .. အဲ့တော့ မှ ဖာသိဖာသာနဲ့ နေတတ်တယ်ဆိုတဲ့အမေ့ မေတ္တာရိပ်ရဲ့ လွမ်းမိုးမှု့ကို ခံစားလာရတယ်။ အမှန်အတိုင်း ဝန်ခံပါရစေအမေ ။ အဖေ့ကို အမေ့ထက်ပိုချစ်တယ်လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ထင်မှတ်ခဲ့မိတဲ့ သမီးဟာ တကယ်တော့ အဖေထက် အမေ့ရဲ့ လွမ်းမိုးမှု့တွေက ပိုကြီးနေတယ်ဆိုတာကို သိသိသာသာကြီး ခံစားလိုက်ရတယ် အမေ ။ အမေ့ပုံရိပ်တွေက ပုံဖော်လို့မကုန်နိုင်ဘူးအမေ ။ အမေ့မေတ္တာတွေကလဲ စာစီကုံးလို့ မမှီနိုင်ဘူးအမေရယ် ။ အဖေ့ကို သိပ်ချစ်တဲ့အမေ ၊ သမီးတို့တွေရဲ့ ဘဝတွေကို အဖေနဲ့အတူ လက်တွဲညီစွာ အနှစ်၃၀ကျော် အပြုံးမပျက် ထမ်းပိုးပေးခဲ့တဲ့ အမေ ၊ သားသမီးတွေကို လိုလေသေးမရှိအောင် နောက်ကွယ်ကနေ ဖြည့်ဆည်းဖြည့်စွပ်ပေးနိုင်စွမ်းလွန်းတဲ့ အမေ ... အဲ့ဒီမေတ္တာတော် အနန္တနဲ့ အမေကို စိတ်ပင်ပန်းအောင် ၊ စိတ်ထိခိုက်အောင် ပြောခဲ့လုပ်ခဲ့ မိတာများရှိရင် ဒီနေရာကနေ ရိုးကျိုးစွာ ဝန်ချတောင်းပန်ပါတယ် အမေ ...ပြီးတော့ အမေ့ဆီကနေ ဆုတဆုလဲတောင်းပါရစေအမေ.. အမေ့ဘဝကို ဒိထက်ပိုပြီး အေးချမ်းအောင် လုပ်ပေးနိူင်စွမ်းတဲ့ သမီးဖြစ်ပါရစေလို့ပေါ့ အမေ.... အမေ့ရဲ့မွေးနေ့မှာ အမေ့မေတ္တာတွေကို စာစီကြည့်တယ်အမေ ... စာမစီနိုင်မှန်းသိပေမဲ့ အမှတ်တရပေါ့အမေရယ် . ..
အမေ့မာန်ထုနဲ့ အနာဂတ်ခရီးကို ချီတတ်နေတယ်အမေ။
အမေ့ရောင်ဝါစွမ်းနဲ့ ဘဝခရီးမှာ အမှောင်တွေကင်းခဲ့တယ်အမေ။
သမီးစေတနာနဲ့ အမေ့ဘဝလည်း အမှောင်ကင်းပါစေအမေ။
အမေ... ဒီမွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် အေးချမ်းသောဘဝကို ပိုင်ဆိုင်ပါစေ။
သမီးတို့နဲ့ အတူ သက်ထက်ဆုံး ပျောင်ရွှင်စွာ နေနိူင်ပါစေ အမေ.....။
စာကြွင်း။ ။ အမေ့မွေးနေ့က ၈လပိုင်း၁၉ရက်နေ့က(မြန်မာလို)ပါ။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဒီစာကို အဲ့ဒီနေ့မှာ အဆုံးမသတ်နိူင်ခဲ့ဘူး အမေ။ မနေ့က အမေ့ကို ဒေါသနဲ့ စကားပြောမိလို့ အမေ့ကို တောင်းပန်ရင်း ဒီစာကို အဆုံးသတ်အောင် ရေးခဲ့တယ် အမေ ။ အချိန်မှီ အမေ့ဆီမပို့နိူင်တဲ့ မွေးနေ့လက်ဆောင်အတွက် အမေ သမီးကို ခွင့်လွတ်နော် ..
ရေးသားသူ- ညီမလေး Time 6:57 AM2comments
အကြောင်းအရာ။ ။ အမေနဲ့ပါတ်သက်သမျှ
ရေးသားသူ- ညီမလေး Time 6:55 AM3comments
တခါတခါကျလဲ ဘဝတွေက မောတယ် ။ ဆန္ဒ တခုအတွက် မလုပ်ချင်တာတွေ လုပ်နေရ ၊ သည်းမခံချင်ပါဘဲနဲ့ သည်းခံနေရ ၊ မပေးချင်ပါဘဲနဲ့လည်း ပေးနေရနဲ့ .. အချိန် ၊ လွတ်လပ်မှု့ ၊ ခံစားမှု့ အားလုံးပေါ့ ။ အဲဒီဒုက္ခတွေနဲ့ အဝေးဆုံးကို လွင့်ထွက်သွားချင်ပေမဲ့ အတ္တ ရေသောက်မြစ်က ဆန္ဒ ဆိုတဲ့ အတားအဆီးတွေကို အမြစ်တွယ်နေစေခဲ့ပြီ ။ ပြောမဲ့သာပြောတာပါလေ ကိုယ်တိုင် တည်ဆောက်ထားတဲ့ အတ္တ နဲ့ ဆန္ဒကြား ချောင်ပိတ်မိနေတာ ဆိုတော့လည်း သနားစရာတော့ မကောင်းပြန်ဘူး ။
ဟူး.........အဲ့ဒီဆန္ဒဆိုတာကကော သတ်မှတ်ထားတဲ့ လယ်ဗယ်ကိုရောက်ရင် ရပ်တန့်သွားမှာတဲ့လား ။ ဟင်း........မထင်ပါဘူး ။ သူကတော့ ရှေ့ဆက်အုန်းမှာပါပဲ ။ သေချာတဲ့ အဖြေ ကိုလည်း သိပါလျှက်နဲ့ ၊ အေးချမ်းတဲ့ ဘဝလမ်းကို ရွေးချယ်ခွင့်လည်း အပြည့်အဝ ရှိပါလျှက်နဲ့ မီးထဲကိုမှ တိုးချင်တဲ့ ပိုးဖလံမျိုးဆိုတော့လည်း ပူအုန်းပေါ့ကွယ် ။ အပူခံလိုက်အုန်းပေါ့....။ သိလျှက်နဲ့ မိုက်နေတဲ့ သိမိုက်က ချွတ်ဖို့ခက်သလို ကျွတ်ဖို့လည်း ခက်တယ် ။ အော်...ဒုက္ခ ... ဒုက္ခ.......
ရေးသားသူ- ညီမလေး Time 8:33 PM0comments